HomeAfaan OromooTooftaa fi Dhaadannoo Siyaasaa Hatattamaa
Damee Boruu: Bitootessa 06/2021
Fano leader, Mesafint Tesfu, speaking in an event organized in Gondar over a year ago. Photo : social media
Tooftaa fi dhaadannoon siyaasaa yaroo wajjin jijjiramuu qabu. Uummata Oromoo kiyyoo garbummaa jalatti kan hudhee qabee jiru sirna nafxanyaa akka tahe beekamaa dha. Kalltattiin tahe al kallattiin sirnaa nafxanyaa kana irratti wagga shantamman darbaniif qabsoo gochaa jirra. Har’as qabsoon uummata keenya hin xumurramne. Caalaa iyyuu humni sirna nafxanyaa leelisu kun karaa mootummaa qindaa’ee fi hidhatee Saba Oromoo, sabaa fi sab-lammii Impaayeera Itoopiyyaa keessa jiran hundaa lafa irraa buqqisaa, qabeenya isaa saamaa, barbadeessaa fi sanyii duguggaa akka raawwachaa jiru uummatni addunyaa ragaa wajjin hubachaa jira.
Baatii arfan darban kana keessa humni sirna nafxanyaa leelisu kun akka uummata biyyaa sana keessa jiraatuuf xannacha tahe jiru saaxila of baasee jira. Warri sirna nafxanyaa leelisu kun maqaa “Faanoo fi Milishaa AMhaaraa” jedhuun ijaaramnaii akka biyya jeeqaa jiran falamaa hin qabu. Biyyaa jeequu irra darbanii lafa saamaa, qabeenyaa barbadeessaa fi sanyii isaan irree adda tahee duggugaa jiru. Uummata Qimaant, Beenshangulii fi Oromoo waggaa sadan darbeef lafa irraa duguggaa turan biyyi lafaa jalaa haa dhokkatu malee maqaa kanaan yaroo gabaaba kana keessatti yakki waraanaa raawwataniif akka itti gaafatani fi biyyii Tigray keessaa hatattamaan bahan ifatti gaafatamaa jiru.
Faanoo fi Milishaan Amhaaraa duguggaa sanyii kan raawwachaa turanii fi jiran Uummata Qimaant, Benshaangul, Oromoo,fi Tigray tahe utuu jiru maqaa isaanii kan beekame waraana Tigray booda. Biyyaa lafaa irratti beekamtii argateen Kanaan waamuun siyaasaa keenya har’a of harkaa qabnuuf baayyee murteessaa dha. Kana booda median, aktivistoonni fi ijaarsoonni Oromoo sirna nafxanyaa dhiifnee maqaa isaa biiyi lafaa isaan bare humni Faanoo fi Milishaa Amhaaraa Oromiyaa keessaa bahu qaba dhaadannoo jedhu irratti yoo xiyyeefanne bu’aa waan qabu natti fakkaata.Yaadni koo sirna nafxanyaa kan jedhu dhiifnee “Faanoo fi Milishaa Amhaaraan” Oromiyaa keessa haa bahum jechuu koo ti..
Kana gochuun anaaf qanxoomina siyaasaati malee kaayyoo fi akeeka Oromiyaa bilisa baasuu wajjin wal hin faalu. Har’a Faanoo fi Milishaan Amhaaraa haala hamaan hidhatanii kan jiran handhura Oromiyaa Finfinnee keessa akka tahe ifaa dha. Kanaafu nuyi Finfinnee dabalatee humn iFaannoo fi Milishaa Amhaaraa hidhatee jiru biyya keenya keessaa haa bahu yoo jenne haqni keenya dhageettii guddaa argata. Utuu akka yaadaa koo tahe amma yaroo biyyi lafa Faannoo fi Milishaa Amhaaraa akka yakkamtoota waraanatti fudhatee jiru nuyis sirna nafxanyaa dhiifne afaan biyyi lafaa isaa fudhateen waamne siyaasaa ol anaa gonfanna. Gara fuula duratis biyya keenya keessaa isaan baasuuf karaa soqachaa deemna.
Faanoo fi Milishaan Amaaraa Oroomiyaa , Benshangulii fi biyya Tigray keessaa akka bahan ni qabsoofna. Saba fi sab-lammii Impaayeera Itoophiyaa Faanoo fi Milishaan Amaaraan dorsisamaa fi dhiitamaa jiran wajjin harka wal qabnee waldaansoo keenya amma galma bilisummaa itti fufuna.
Injifanno Uummata Oromoof!